Warbixin ku saabsan qorshe RW Cumar C/rashiid taageero uga raadinayo Imaaraadka Carabta. (Aragti)
Home » Qormooyinka » Warbixin ku saabsan qorshe RW Cumar C/rashiid taageero uga raadinayo Imaaraadka Carabta. (Aragti)	Warbixin ku saabsan qorshe RW Cumar C/rashiid taageero uga raadinayo Imaaraadka Carabta. (Aragti)
19/11/2016	1,279 Views Waxaa nasiib-darro ah in shaqsiyaad magac weyn ku leh siyaasadda Soomaliya iyo beelo ay weli uga dhegan tahay dhibaatooyinkii qabaa’ilada Soomalida dhex maray 1991-kii inay muddooyinkaan danbe isticmaalaayeen hal-ku dhigyo colaadeed (negative slogans) sida ” NO more ABGAAl” oo micneheedu yahay maya madaxweyne danbe ee Hawiye ( NO MORE HAWIYE PRESIDENT).
Somali Affairs Monitoring Club.
FIIRO GAAR.Qoraalkani wuu gaar u yahay cidda ku qoran.kamana tarjumayo Aragtida Shabakaddan Shaaciye.com.
Previous: FIIRSO SAWIRO: Kulan isdhexgal ah oo dhexmaray Booliska iyo Bulshada Muqdisho
Next: Madaweynaha oo ka digay in ciidamo hubeysan lala galo goobaha doorashooyinka.